Ingghọta mmụta nwata ahụ site na echiche nke mmụọ - Afrikhepri Fondation
Ịkụziri ụmụaka ihe
Ghọta mmụta nwata ahụ site n ’echiche ime mmụọ
Na-agụ: 50 min
Lndụ nke oge a na-enye ọtụtụ nsogbu ndị nna nna anyị ha chere na-edozi. Ọ na-enye ihe ihe obula nke otutu ajuju. Kedu ihe a na-ajụ n'ịjụ ajụjụ dị iche iche na mbara igwe n'oge ahụ: ajụjụ gbasara mmadụ, nwanyị, ajụjụ gbasara mmụta na nkà mmụta, ajụjụ banyere iwu, ịdị ọcha, na ihe ndị ọzọ. A na-eji ụzọ dịgasị iche iche eme ihe iji bulie ha elu. Ọnụ ọgụgụ ahụ enweghị njedebe nke ndị ahụ, tinyere usoro ọ bụla, bilitere iji dozie ajụjụ dị otú ahụ ma ọ bụ ajụjụ dị otú a, ma ọ bụ inye aka ma ọ dịkarịa ala na ngwọta ya. Ogoro nke mmadu nile na-agbakwa ibe ha ebubo: ndi mmadu, ndi na-eme mgbanwe; ndị na-asọpụrụ onwe ha, na-akwanyere usoro iwu ahụ ùgwù, na-achọ ka mmalite evolite ya; na ndị na-ahụ maka nkwenkwe, na-ebute mwakpo mwakpo na ụlọ ọrụ na ọdịnala. Gburugburu echiche ndị a nke kadinal bụ ọnụ ọgụgụ na-enweghị ngwụcha nke nkwenye dị n'etiti.
Site n'inweta nlezianya anya iji nyochaa ndụ, anyị enweghị ike, n'ihu ọnụ ọgụgụ dị otú ahụ, wepụ mmetụta a: nwoke a dị ugbu a enweghị ọtụtụ ihe ọhụụ maka ịrụzu ọrụ ya. Mgbalị na-abawanye ndị ga-achọ ịgbanwe ndụ n'enweghị ezigbo ihe ọmụma banyere ụkpụrụ ya. Otú ọ dị, ndị na-eme atụmatụ imetụta ọdịnihu agaghị ejedebe ọmụmụ ihe ha n'elu ndụ. Ha ga-enyocha ebe miri emi.
Ndụ mmadụ niile yiri osisi nke nwere ọ bụghị nanị ihe ọ na-enye anyị anya, kama ọ ga-abụ n'ọdịnihu na ọ na-ezo n'ime omimi ya. Ịtụgharị uche na osisi, na-emepe akwụkwọ mbụ ya, na-akpọsa okooko osisi na mkpụrụ osisi. N'ime okooko osisi ndị a na mkpụrụ osisi, osisi a enweelarị germs. Ma, olee otú ikiri, nke a ga-esi mee ka ọ bụrụ akụkụ nke osisi ahụ, chọpụta ụdị ọdịdị ndị a n'ọdịnihu? Nnyocha nke ọdịdị nke osisi bụ ọnọdụ dị oké mkpa nke nnyocha a.
N'otu ụzọ ahụ, ndụ mmadụ na-ezobe mkpụrụ nke ọdịnihu ya. Mana nani ihe omuma nke mmadu na-ezoro ezo na-eme ka o kwe omume imuta ihe di n'iru a. Ọ bụ eziokwu na ụdị nchọpụta a enwechaghị ọchị na ndị anyị na ha dịkọrọ ndụ. Ha na-ejide onwe ha elu ma kwenye na ha na-ada ụkwụ ha site na ịbanye na ebe ndị na-enweghị ike ịhụ nchọpụta n'èzí. N'eziokwu, ịhụ osisi ahụ adịghị mfe. Mmadụ maara na osisi ndị a na-amị mkpụrụ. Ma ndụ mmadụ bụ eziokwu pụrụ iche. Osisi ndị ga-eme ka ọdịnihu ya pụta ìhè apụtaghị. Ma na nwoke ahụ, okooko osisi ndị a na-adị na ya, dịka osisi nke na-eto akwụkwọ. Ma ọdịnihu a ga-aghọ nke doro anya na, mgbe anyị na-anọghị n'elu, anyị na-abanye n'ime ebe dị omimi nke ọdịdị mmadụ. Otutu oru ngo ndi n'egbado oge ayi agagh enwe ike iga nke oma ma oburu na ha sitere na omuma zuru oke banyere omimi nke ndu madu.
Ọrụ nke sayensị ime mmụọ bụ inye anyị ntụgharị uche nke Eluigwe na Ala nke na-ejide ma banye n'akụkụ nile nke ndụ mmadụ. Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na usoro niile nke, taa, na-ekwu ya, nwere ikike ikwu ọrụ dị otú ahụ. Nke a bụ ihe dị mkpa nke sayensị ime mmụọ na ihe ọ pụrụ ịbụ, ma ọ bụrụ na ọ na-anabata nke a. Ọ gaghị abụ nkwenkwe na-adịghị mma nke na-enye ndị mmadụ ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe ha, ma ọ bụ ngwá ọrụ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị n'ijere ndị na-achọsi ike, maka onwe ha, ogo dị elu nke mmepe. O nwere ike iji mmekorita kachasị njọ nke ụmụ mmadụ n'oge a na-emekọ ihe mgbe ọbịbịa nzọpụta ya.
O doro anya na sayensị ime mmụọ na-ekpughe ọtụtụ ọgụ ma na-eme ka ọtụtụ ndị na-enyo enyo na-ekwu na ọ bụ ozi dị otú ahụ. A ghaghị igosi ikwenyeghị ntụkwasị obi a site na ihe ndị dị iche iche, ndị na-edozi onwe ha na ndị na-echekwa ụdị ihe ọ bụla, n'ihi na ọ pụghị imeju otu ọ bụla, echiche ya na-adị nnọọ mma karịa mmụọ ọ bụla.
N'ezie, echiche ya nwere, nanị, mgbọrọgwụ ha n'ezi ihe ọmụma nke ndụ. Ma onye maara ndu ga-ekwe ka ihe mgbaru ọsọ ya kwuo nanị site ná ndụ n'onwe ya. Ọ gaghị adọpụta usoro mmemme. Ọ maara na iwu ndị dị mkpa nke ndụ ga-anọgide n'ọdịnihu dịka taa. N'ihi ya, sayensị ime mmụọ ga-akwanyere usoro ihe dị ugbu a ùgwù. Ihe obula n'adighi oke nke ugbua, odigh ike ihu nkpuru nke di n'iru. Ma ọ makwa na na ihe ọ bụla ịghọ ọganihu na mmepe. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ahụ, na ugbu a, mkpụrụ nke mgbatị na metamorphosis. Ọ naghị emepụta ihe omume. Ọ na-edozi ha na ndụ n'onwe ya. Ma akwukwo ọgụgụ a bu, ya mere ikwu okwu, ihe omume a n'onwe ya, ebe obu na emetutala omimi nke evolushọn.
Omumu omumu omumu a nke ndi mmadu, nke ndi sayensi na-acho, ghaghi iru uzo kachasi nma ma di irè iji nweta azịza nke okwu kachasi mkpa nke oge anyi. Anyị ga-etinye ụkpụrụ ndị a n'ọrụ taa maka otu n'ime nsogbu ndị a, maka ajụjụ agụmakwụkwọ. Ndị a agaghị aza ajụjụ na mmemme; anyị ga-akọwa, nanị, ụdị nwa ahụ. Na-enweghị enyemaka maka enyemaka anyị, ọdịdị nke usoro ihe ndị mmadụ na-aga n'usoro ga-atụ aro isi ihe ndị ga-eme ka ị nweta ọzụzụ.
Iji chọpụta iwu nke uto mmadụ, anyị ga-ebu ụzọ nyochaa usoro mgbaasị nke mmadụ.
Ihe echiche ise anyị nwere ike ịhụ na ihe ọmụmụ ime mmụọ na-ekwupụta na mmadụ bụ, maka nchọpụta anwansi, nanị akụkụ, akụkụ nke ọdịdị mmadụ, ahụ ya. Ahụ nke a na-edo onwe ya n'okpuru otu iwu dịka ndụ anụ ahụ, ọ bụ otu ihe ahụ na otu ikike ndị ahụ dịka ụwa dum na-adịghị ndụ. Ya mere, sayensị ime mmụọ na-ekwu na mmadụ nwere anụ ahụ n'otu ụzọ ahụ dịka alaeze niile nke mineral. Ọ na-apụtakwa na mmadụ, dị ka ahụ anụ ahụ, naanị ihe dị iche iche na-erube isi, iji jikọta ma ọ bụ gbazee, iji mee ihe ma ọ bụ kwatuo, na iwu ndị na-achịkwa ihe ndị dị na ala ahụ.
N'èzí ahụ anụ ahụ, sayensị ime mmụọ ka na-amata ụkpụrụ nke abụọ dị mkpa nye mmadụ: ahụ nke etheric ma ọ bụ ahụ ike. Ka onye sayensi ghara ịtụ egwu okwu ahụ "etheric". Okwu a "ether" na-ezo aka na ebe a na ihe ọzọ ma e wezụga okwu efu nke physics. Uru nke okwu a ga-edegharị n'echiche anyị ga-ekwu na ya na mbụ.
Obere oge gara aga, amalitere ịre ya dịka usoro ihe na-enweghị usoro sayensị iji kweta "ahu nke etheric". Otú ọ dị, na njedebe nke narị afọ nke iri na asatọ na rue etiti narị afọ nke iri na itoolu, echiche a abụghị "ọkà mmụta sayensị". Echere ya mgbe ahụ na okwu ahụ na ikike ndị nwere ihe ịnweta enweghị ike, site n'onwe ha, gbanwee ịnweta ihe a dị ka ihe dị ndụ. Ndị agha a aghaghị inwe, na mgbakwunye, "ike" nke a kpọrọ "ike dị mkpa". Otu nwere ike iche na ike dị otú ahụ na-arụ ọrụ na osisi, na anụmanụ, na ahụ mmadụ. O mepụtara ihe dị mkpa dị ka ike magnet nke na-achọpụta mmasị na magnet.
Oge nke ịhụ ihe onwunwe n'anya nke na-esochipụrụ ozizi a. A na-emezi ya ka ịkọwapụta ihe dị ndụ dị ka nke ahụ a na-akpọ ihe na-adịghị ndụ; na akụkụ ahụ dị ndụ enweghị ike ndị ọzọ karịa ibu ịnweta, na ọ bụ nanị mmetụta nke ndị agha ndị a dị mgbagwoju anya, na ha wuru ihe dị mgbagwoju anya. Ugbua enwere ihe karia ihe ndi ozo na-eme ka ha ghara ighota "ike ndu" a. Na sayensị ndị dị na mbara igwe, ọtụtụ ndị na-eche echiche echebewo, site n'eziokwu, na mkpa ọ dị ikweta ụdị ike dị mkpa ma ọ bụ ụkpụrụ dị mkpa.
Ya mere, n'ụzọ ụfọdụ, sayensị nke oge a na-abịakwute ihe mmụta sayensị ime mmụọ na-ekwuputa banyere ahụ dị ike. Otú ọ dị, enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti ihe abụọ a. Nkà mmụta sayensị nke oge a, nke sitere n'echiche nke uche, na-abịa site n'echiche, iji kweta ụdị ike dị mkpa. Mana nke a abughi usoro nke nchoputa sayensi nke mmuo nke bu nmalite nke sayensi ime mmuo, ihe nke ya na-enyekwa ya ihe nkwukọrịta ya.
Isi ihe di iche iche, site na nke a, n'etiti ihe omumu ime mmuo na sayensi nke oge anyi apughi ikwubiga ya ókè. Ọ na-atụle ahụmahụ nke uche dị ka isi iyi nke ihe ọmụma niile. Ihe niile a na-enweghị ike ịkọ bụ na mpaghara nke enweghị ike ịmata ya. Mmetụta nke mmetụta uche na-akpali nkwubi okwu ya na ndapụta ya, mana ọ na-ajụ ihe ndị na-agabiga echiche ndị a ma wepụ ha na njedebe nke ihe ọmụma mmadụ. Site na echiche nke sayensị ime mmụọ iche echiche dị otú a yiri nke onye kpuru ìsì nke na-ekweta naanị ahụmahụ nke mmetụ na mmetụta dị mma nke ahụmịhe ndị a, na ịjụ echiche nke anya dịka ikike karịrị uche nke uche. mmụọ mmadụ. N'ihi na sayensị ime mmụọ na-egosi na mmadụ nwere ikike ịzụlite, na ọ nwere ike ịbịakwute ihe ọmụma nke ụwa ọhụrụ site na ịmepụta akụkụ ọhụrụ. Agba na ìhè na-agba gburugburu n'akụkụ onye ìsì nke na-adịghị ahụ ha, akụkụ ndị dị mkpa na-akụda ya. Sayensị ime mmụọ na-ekwuputa na ụwa ọhụrụ nwere ike iru mmadụ, nakwa na ọ nwere ike ịbanye ya, na ọnọdụ nke ịmepụta akụkụ ndị dị oké mkpa maka nghọta ha.
N'ọsì, ọrụ ahụ mepee ụwa ọhụrụ. Site na mmepe nke akụkụ dị elu, mmadụ nwere ike ịnata ụwa dị iche na ndị ọhụụ ya na-enye ya ohere. Ma onye isi nwoke nwere ike ịrụ ọrụ na ma ọ bụ, ọ dabeere na ọdịdị nke akụkụ ya. Ma akụkụ ahụ nke mmadụ nwere ike ịbanye n'ime ụwa hyperphysical dị na onye ọ bụla n'ime anyị na ọnọdụ embryonic. Onye ọ bụla nwere ike ịmepụta akụkụ ndị a; o zuru ezu iji nwee ndidi, nkwụsi ike na ike dị mkpa iji nyefee usoro ndị na-eduga na nsonaazụ a ma kọwaa ya n'akwụkwọ m nnabata. Nkà mmụta sayensị adịghị ekwu: Otu nwoke, n'ihi nzukọ ya, nwere ikikere nke ọmụma; ma ọ na-ekwu, sị: Nwoke ahụ maara ụwa na akụkụ ya na-ahapụ ya ka ọ hụ. Ọ na-eche banyere ụzọ ndị ga-esi mee ka ike anyị ghara ịdị ike n'oge ọ bụla nke mmepe mmadụ.
Ọ bụkwa echiche a nke na-akpali mkpali ya banyere ahụ dị omimi ma ọ bụ etheric na ụkpụrụ nile dị elu nke ọdịdị mmadụ, nke e depụtara na nke a n'ọmụmụ ihe a. Ọ na-achọpụta na anụ ahụ, naanị ya, nwere ike ịnweta nyocha nke uche anyị, nakwa na n'ịgwa ha otu nwere ike kwusi, site n'ịtụgharị uche, ịdị adị nke ahụ dị elu. Ma ọ na-akụzi ụzọ isi banye n'ime ụwa ebe ụkpụrụ dị elu nke ọdịdị mmadụ bilitere n'ihu onye na-ekiri ya, dị ka ọ na-apụta, n'ihu ndị ìsì, na agba na ìhè, mgbe ọrụ gasịrị. Maka ndị mmadụ mepụtara akụkụ nke nghọta dị elu karị, ahụ nke etheriki ma ọ bụ ahụ dị ike bụ eziokwu nke ịhụ, ọ bụghị nanị ihe okike nke ikike iche echiche anyị.
Ọdịdị nke etheric ma ọ bụ nke dị ike na-ahụkarị ụmụ mmadụ, anụmanụ na osisi. Ọ bụ onye na-arụ ọrụ n'ime ihe na ike nke anụ ahụ, ihe dị iche iche nke uto, mmepụta, ntụgharị nke sap, & c. Ọ bụ onye na-arụpụta ma na-egosipụta ahụ mmadụ, nke ọ bụ ma onye bi na onye na-ese ụkpụrụ ụlọ. Anyị nwere ike ịkpọ anụ ahụ ahụ ma ọ bụ okwu nke ike a. Ụdị na akụkụ nke ahụ abụọ a bụ, n'ime mmadụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe yiri ya, ma ọ bụghị otu ihe ahụ. Na ụmụ anụmanụ, ma na-enwekwu ihe na osisi, akụkụ ahụ nke etheric dị iche iche site n'anụ ahụ ahụ na nghazi ya.
Ụkpụrụ nke atọ nke ọdịdị mmadụ bụ mbara igwe ma ọ bụ anụ ahụ. Ọ bụ onye na-edekọ ihe mgbu na ọṅụ, nke na-egosipụta mmuo, ọchịchọ, agụụ mmekọahụ, wdg. Ihe omuma a nile agagh adi ka edere ya na aru aru na etheric. Njirimara ndị a nwere ike ichikota dị ka ihe mmetụta. A naghị enye ihe ọkụkụ ahụ. N'ihi na ụfọdụ osisi na-emeghachi omume site na mkpali ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla ọzọ, ihe karịrị otu ọkà mmụta sayensị kwubiri, n'oge a, na osisi nwere, ruo n'ókè ụfọdụ, ngalaba nke mmetụta. Na nkwenye ndị a, ọ dị mkpa ịchọta ihe dị mkpa nke mmetụta ahụ. Ọ dịghị esite na nzaghachi maka ntụrụndụ nke mpụga, ma, n'ụzọ dị iche, n'ime ihe dị n'ime, dịka ọṅụ ma ọ bụ ihe mgbu, ọchịchọ, ọchịchọ, wdg, kpatara nke a. Ọ bụrụ na anyị eleghara echiche a anya, ọ ga-abụ onye ziri ezi ikwu na tincture nke sunflower na-enwe mmetụta uche maka ụfọdụ ihe n'ihi na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ha na-akpakọrịta.
Naanị mmadụ na anụmanụ nwere ahụ mbara igwe. Ọ bụ akụkụ nke ndụ dị egwu.
Onye aghaghi izere njehie nke ụfọdụ ndị ọkachamara na-ahụ maka ọdịdị ahụ na-echepụta akụkụ ahụ nke etheric na ahụ dị na mbara igwe bụ nke nwere ihe dị mma karịa anụ ahụ. Ọ ga-achọpụta ụkpụrụ dị elu nke ọdịdị mmadụ. Ụdị etheriki bụ ike e gosipụtara na ụdị ụfọdụ. Ọ na-agụnye ndị na-eme ihe ike, ọ bụghị ihe; na mbara igwe ma ọ bụ nke anụ ahụ bụ ụdị e ji agba agba, ihe oyiyi dị ebube, na-eme onwe ha ka ha dị elu.
Ụdị ahụ kpakpando dị iche n'anụ ahụ na ụdị na ogo. N'ime ụmụ mmadụ, ọ na-emetụta ụdị ọdịdị elongated ovoid, bụ nke a na-etinye n'ahụ anụ ahụ na etheric. Ọ karịrị ha ma n'akụkụ niile n'akụkụ ọkụ.
Kaosinadị, a na-eji mmadụ nke anọ amata mmadụ dị iche na nke ọzọ: onye na-egosipụta "M". Obere okwu "Me", dika ejiri ya, dika ima atu, na German, bu aha di iche na ndi ozo. Site na iji ezi uche na-eche banyere njirimara nke aha a, a na-eme ka anyị mata ihe ọmụma banyere ọdịdị mmadụ. Aha ọ bụla ọzọ nwere ike itinye mmadụ niile na enweghị mmasị n'ihe ahụ kwekọrọ na ya. Maka onye ọ bụla, a ga-akpọ tebụl " okpokoro ”, a ga-akpọ oche ahụ“ oche ”. O bughi otu ihe ahu ma abiakwute ya “Me”. Ọ dịghị onye nwere ike iji ya gosipụta onye ọzọ karịa onwe ha; onye ọ bụla n’ime anyị ga-asị na ọ bụ naanị onwe ya. Aha "M" enweghị ike ịtinye na ntị m dị ka aha maka onwe m. Site n'iji onwe ya dika "Mu", mmadu aghaputara onwe ya aha ya. A onye nwere ike ikwu na onwe ya "M" bụ ụwa maka onwe ya. Okpukpe nke sayensị ime mmụọ amatala eziokwu a. Ha kwukwara, sị: "Chineke" bụ onye, ​​maka ndị dị ala, na-egosipụta onwe ya naanị site n'èzí site na ihe ndị gbara ya gburugburu, na-amalite, mgbe "M" pụtara, ikwu okwu n'ime ịdị adị. Ngalaba a bụ njirimara nke "ego ahụ", ụkpụrụ nke anọ nke ọdịdị mmadụ.
Na "aru nke ego" a gosipụtara mkpụrụ obi mmadụ ka elu. Mgbakwunye nke ahụ a na-ebuli mmadụ elu na elu elu nke ihe okike ụwa. Ma nke a "M" n'ime nwoke ugbu a abụghị ụzọ dị mfe. Anyị nwere ike ịhụ ọdịdị ya site n'iche ndị ikom nwere ogo dị iche iche nke evolushọn.
Nyochaa obi tara mmiri nke onye na-agụghị akwụkwọ na onye gụrụ akwụkwọ na Europe wee jiri nke abụọ tụnyere ezigbo onye nwere nnukwu ọchịchọ. Ha niile nwere ikike ịgwa onwe ha: "M"; "ego ahu" di na nke obula. Ma obi ojoo aghara aghara tinyere nke a " M ”na-erube isi na agụụ ya, mmuo ya na ọchịchọ ya dịka anụmanụ. Ọ bụrụ na nwoke nke mepere emepe dị elu na-ahapụ onwe ya na ọchịchọ ụfọdụ na ọchịchọ ụfọdụ, e nwere ndị ọzọ, n'aka nke ọzọ, ndị ọ na-ewetara ma na-ebelata. Na onye na-ahụ maka ọdịmma, n'ikpeazụ, agụụ na ọchịchọ dị elu emeela ka ebumpụta ụwa ochie na agụụ mmekọahụ dị n'elu ala. Mgbanwe ndị a niile sitere na omume nke "M" na ụkpụrụ ndị ọzọ, ọrụ a mejupụtara ọrụ nke "M": ịme ka anụ ahụ dị ala na-eme ka ọ dị ọcha.
Ya mere, na nwoke ahụ nke gafeworo mmalite nke evolushọn ebe ọ kwụsịrị ịbụ ihe egwu nke ike nke ụwa dịpụrụ adịpụ, ụkpụrụ ndị dị ala abawanyela n'okpuru nduzi nke "M". Na mgbe mmadu malitere iguzo n'elu anu, site na mgbakwunye nke "m," o ka yiri anu ahu site na ala ya. Na etheric ya ma ọ bụ ike ya bụ nanị akụkụ nke ike dị mkpa nke ibu na mmeputakwa. Òtù ahụ nke kpakpando na-egosipụta nanị ọdịdị, ọchịchọ na ọchịchọ nke ọdịdị dịpụrụ adịpụ chọrọ. Ọ bụ ezie na mmadụ, site na ndụ ma ọ bụ ntinye n'ime ya, na-esi na omenala a pụta na-emewanyewanye ka ọganihu, "I" ya na-arụ ọrụ na-agbanwe ụkpụrụ ya ndị ọzọ. Ya mere, akụkụ ahụ nke astral na - aghọ oche nke nụchasị mmetụta nke obi ụtọ na nhụjuanya, nke agụụ na ọchịchọ ndị a nụchara anụcha.
A na-agbanwe etheric ma ọ bụ ahụike dị na ya. Ọ na - aghọ oche nke àgwà, ọchịchọ na - adịgide adịgide, obi na ncheta. Otu nwoke nke "m" agbanwebeghị akụkụ ahụ nke etheric anaghị echekwa ncheta nke ihe omume dị ndụ. Ọ na-ebi ndụ ya dịka ọdịdị nke mmadụ si achọpụta ya.
Ọganihu nke mmepeanya ka a sụgharịrị maka mmadụ site n'ọrụ a nke "M" na ụkpụrụ ya dị ala. Ọrụ a na-agbada n'anụ ahụ. N'okpuru nduzi nke "M" physiognomy, a na-emegharị ahụ ma na-arụ ọrụ ahụ, akụkụ ahụ dum nke ahụ ahụ gbanwere. Ụzọ dị iche iche nke mmepeanya na agụmakwụkwọ na-arụ ọrụ dị iche na ụkpụrụ dị iche iche nke mmadụ. Ihe ndị na-emekarị omenala na-eme na mbara igwe. Ha na-eji ihe ụtọ, ihe mgbu, na ọchịchọ dị iche iche na-emetụ ya n'ahụ site n'usoro iwu dị iche na nke ahụ rịọrọ ya. Nkọwa nke ọrụ nkà na-arụ ọrụ nke etheric. Mmadụ na-agbanwe ya site n'ichepụta, ekele maka ọrụ nke nkà, ụwa dị elu ma dị mma karia ebe nghọta nke uche. Okpukpe na-akwado ọganihu na ịdị ọcha nke ahụ etheric. Mmetụta okpukpe na-enwe ọrụ dị ebube ha na-eme n'ọdịdị mmadụ.
Ihe a na-akpọ mmata nke ọma na ihe ọjọọ bụ nanị ọganihu nke ahụ etheriki n'ihi mgbalị nke "M" site na usoro ntinye. Amamihe a na-amalite mgbe mmadụ, na-achọpụta na ọ ghaghị ime ka ọ ghara ịda mbà, na-eche na ọ na-egbochi imechi ya nke ọma nke na ọ ga-ebute ya na etheric.
Ugbu a, ọrụ a nke "M", iji mezuo iwu ndị dị ala, nwere ike ịpụta, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, site n'otu mgbalị dị n'otu nke agbụrụ mmadụ dum, ma ọ bụ ọ pụrụ ịbụ mmetụta nke otu "M" na-agbanwe onwe ya ahu. N'okwu mbụ, agbụrụ mmadụ nile na-emekọrịta ruo n'ókè ụfọdụ site na ngbanwe a nke mmadụ; na nke abụọ, ọ ga - esite na ọrụ onye ọ bụla "M". Mgbe "I" na-aghọ ike zuru ezu iji gbanwee mkpụrụ ndụ astral nanị site na ike ọ na-adọta n'ime onwe ya, a na-akpọ "Mmụọ nke Onwe" dị ka ọnụọgụ ahụ nke "I" gbanwere. Ngbanwe a dị, na ihe ndị dị mkpa, na inweta ihe ọmụma, na-eme ka echiche anyị na echiche ndị dị elu na-eme ka obi anyị dịkwuo mma.
Mana "I" nwere ike ime ka mmadu nwekwuo ike na aru ya. A na - enweta nsonaazụ a ọ bụghị naanị mgbe a na - eme ka ahụ dị na mbara igwe baa ụba, mana mgbe etinyere etheric ma ọ bụ ahụ ike. Mmadụ na-amụta ọtụtụ ihe n'oge ndụ. Mgbe, n'oge ọ bụla, ọ na-ele anya azụ, ọ pụrụ ịsị onwe ya: Amụtawo m ọtụtụ ihe; ma ọ ga-edebe anya na njedebe dị nnọọ nta nke mgbanwe nke mmetụta ya, àgwà ya, mmụba ma ọ bụ ebelata ncheta. Ịmụta bụ ọrụ nke ahụ kpakpando, ebe àgwà ndị a dabeere na etheric ma ọ bụ ahụ ike. Site n'iche ngbanwe nke aru nke kpakpando, n'oge ndu a, ka igaghari oge nke aka na oku nke oge, na mgbanwe nke aru nke etheric ka o jiri aka nnoo gosi hour ahu, anyi ga a na-ekwu kpọmkwem.
Nkụzi nke anwansi, nke na-achọpụta ọ bụla asọmpi mpụga, na-etinye aka n'emeghị ihe ọ bụla nke "M" mgbanwe nke ahụ etheric. Ọ maara na onye ọ bụla ga-arụ ọrụ na nzụlite nke àgwà ya, àgwà, àgwà, ncheta, wdg. Dika emeghariri aru ahu nke etheric, a ga-agbanwe ya, dika sayensi ime mmuo, n'ime ndu nke ndu.
Ruo n'ókè ka ukwuu, mmadụ na-achịkwa ịzụlite ike ndị a pụrụ iji gbanwee ahụ ya. Dị ka ihe atụ, ọ nwere ike ijide ọbara, gbanwee usoro. Akuku nke aru aru di otua na-akppo "madu mo".
Mgbanwe ndị mmadụ na-aghọta na ụkpụrụ ya dị ala n'ihi na ọ na-ekere òkè ná mgbalị aka nke mmadụ dum, ma ọ bụ nke ndị mmadụ, agbụrụ, ezinụlọ, dị iche iche dịka sayensị si dị. ime mmụọ site na aha ụfọdụ. Ya mere, "M" gbanwee, ahụ dị na mbara igwe na-ewere aha mkpụrụ obi, mkpụrụ nke etheric na-aghọ mkpụrụ obi na-edozi anya, na ahụ nke anụ ahụ. Otú ọ dị, anyị ekwesịghị ikwere na mgbanwe nke ụkpụrụ atọ a na-ewere ọnọdụ na-aga n'ihu. Ọ na-eme n'otu oge n'otu ahụ atọ, ozugbo "I" pụtara. Ka anyị kwuo ọbụna na ọ bụghị mmadụ ga-ahụ ọrụ nke "M" ruo mgbe akụkụ nke mkpụrụ obi na-eme.
Anyị na-ahụ, na mmadụ, ụkpụrụ anọ dị iche: anụ ahụ, etheric ma ọ bụ ahụ siri ike, akụkụ kpakpando ma ọ bụ anụ ahụ, na ahu nke "M". Mkpụrụ obi dị mkpụmkpụ, mkpụrụ obi ezi mkpụrụ obi na mkpụrụ obi - ihe mgbagwoju anya, na ọbụna ụkpụrụ dị elu nke ọdịdị mmadụ: "mmụọ ime mmụọ," mmụọ nke ndụ, na mmụọ mmụọ, pụtara dị ka nsonaazụ nke mgbanwe nke ụkpụrụ anọ a. Mgbe mmadụ na-achọ ebe a na-ahụ mmadụ, o nwere ike, n'eziokwu, na-echebara nanị quaternary a echiche. Ọ bụ ọrụ nke onye nkụzi.
Iji rụọ ọrụ na-amị mkpụrụ, onye ga-enyocha ọdịdị nke ụkpụrụ ndị a. Karịsịa, ọ dị mkpa iburu n'obi na ihe ndị a adịghị eme n'ime mmadụ iji chee, n'oge ọ bụla ná ndụ ya, mgbe a mụrụ ya, dịka ọmụmaatụ, otu ọkwa ahụ. N'ikpeazụ, nke ahụ na-aga n'ihu maka ahụ ọ bụla n'ụzọ dịgasị iche iche na afọ ndụ dị iche iche. Ịmata iwu nke na-achịkwa ọganihu nke ọdịdị mmadụ bụ ihe atụ dị oke mkpa nke mmụta na nkà mmụta.
Tupu a mụọ nwa ahụ, onye ahụ na-eme ihe na-eme ya gburugburu n'akụkụ anụ ahụ. Ọ bụghị kpọmkwem na kọntaktị na mbara ala ụwa.
Ahụ anụ ahụ nke nne bụ onye gbara ya gburugburu. Naanị ya nwere ike ime ihe na nwata. Ọmụmụ ime ahụ na-emejuputa n'eziokwu ahụ bụ na mmetụta anụ ahụ na-esi n'èzí nwere ike iru, ozugbo ahụ, nwa ahụ jụrụ envelopu anụ ahụ. Mmetụta uche na-emeghe ka ụwa dị n'èzí, ihe nke na-anọchi, ugbu a, nke onye envelopu nne na-emebu.
Site na echiche nke ime ime mmụọ nke eluigwe na ụwa kwesịrị ekwesị ka a jụọ mmụọ, a mụrụ ahụ ahụ n'oge ahụ, ma ọ bụghị etheriki ma ọ bụ ahụ ike. Dị nnọọ ka nwoke ahụ, ruo mgbe a mụrụ ya, dị na envelopu anụ ahụ nne, yabụ ruo oge nke nkwonkwo nke abụọ, nke ahụ bụ ikwu ruo mgbe asaa n'afọ, ọ na-anọgide na-envelopu envelopu etheric na envelopu astral. Ọ bụ nanị n'oge nkwonkwo nke abụọ na envelopu etheric na-esite na etheric. Mgbe ahụ envelopu astral na-aga n'ihu ruo mgbe ọ ga-etolite.
Na oge a, a na-ahapụ ndị na-agụ kpakpando ma ọ bụ anụ ahụ; ihe a na-eme, maka ahụ anụ ahụ, mgbe a mụrụ mmadụ, nakwa maka ahụ nke etheric na nkeji nke abụọ ka a na-emezighachi maka ahụ ọnya.
Ya mere, sayensị ime mmụọ na-ekwu banyere ọmụmụ atọ. Ruo oge nke abụọ, enwere mmetụta ụfọdụ maka ahụ nke etheric nwere ike ịbịaru ya nso dị ka ìhè na ikuku nke ụwa nkịtị na-abanye n'ahụ ahụ n'ime akpa nwa.
Tupu mmalite ahụ nke abụọ, ọ bụghị ahụ ike dị ala nke na-eme ihe na nwata ahụ.
Nne nke nne na-azụ anụ ahụ nke na-eme ka ọ bụrụ nke na-eme ka ọ dị ike, ma mepee ya nke nta nke nta na envelopu nchekwa ahụ. Ọ ga-abụ otu ihe ahụ nke uto ruo nlọ nke abụọ. Oriri nke etheriki, iji mepee ike ya, buru ụzọ jiri enyemaka nke ndị agha mba ọzọ bụ ndị e zigara ya. N'oge a na-akwalite ntọhapụ nke ahụ etheric ahụ, ahụ ahụ dịlarị onwe ya. Ozu na etheriki, na maturing, na-amalite ike ndị ọ ga-etinye na ọrụ nke ahụ. Ma njedebe nke usoro ndị a bụ mgbe nwatakịrị na-etinye ezé ya maka ndị ọ ketara. Ha na-abụ ihe dị arọ nke anụ ahụ, ya mere, ọ bụ naanị na njedebe nke oge a.
Site na mgbe ahụ, ọ bụ otu onye nke etheriki nke na-elekọta ọganihu. Ma etu a na-etoputa, na oge a, n'okpuru ndu nke aru kpakpando kpuchie ya. Na oge mgbe a na-ahapụ mkpụrụ akụkụ astral, ahụ nke etheric mejupụtara ọhụụ ọhụrụ. A na-akọ ngere site na nwata. Akụkụ akụkụ ahụ na-aghọ nke onwe ya, n'ihi na ugbu a, a naghị enyefe onwe ya onwe ya kpam kpam; nwere onwe ya site na nkpuchi ya, ọ ga-adị mfe ịchọta ụwa.
Anyị maara na tutu a mụọ ya, nwa ahụ adịghị enwe mmetụta nke mmetụta nke ụwa dịpụrụ adịpụ. N'otu aka ahụ, mmadụ kwesịrị izere ikpughe ahụ nke etheric, tupu ọkpụkpụ nke abụọ, gaa na ndị agha na-anọchite anya ya bụ ihe yiri nke mmetụta anụ ahụ na ahụ nkịtị. Na ikuku kpakpando ekwesighi ibute mmetuta ndi a tupu oge ntoro.
Ọ bụghị sententious harangues dị ka: "adabako mmepe nke niile ikike na ike mmadụ" ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu ndị ọzọ yiri nke nwere ike ịtọ ntọala nke nka nke mmuta n'ezi okwu; nka a nwere ike dabere na mmuta oma nke agwa mmadu. Nke a apụtaghị na nkebi ahịrịokwu sịntetik a ezighi ezi, mana iji ha n'ọrụ bụ usoro adịghị mma dị ka ikwupụta, n'ihu igwe, na a ga-eme ka cogs ya niile rụọ ọrụ n'otu. Iji jikwaa igwe ahụ ị ga-agakwuru ya, ọ bụghị nkwenye n'ozuzu ya, kama na ezigbo ihe ọmụma banyere nkọwa ya niile. Na, n'otu aka ahụ, na nka mmụta, mmata nke ụkpụrụ niile nke mmadụ na mmepe nke onye ọ bụla n'ime ha dị oke mkpa… Ọ dị mkpa ịmata akụkụ nke ọdịdị mmadụ ọ dabara adaba ime ihe na afọ a kara aka, yana otu esi eji ihe a eme ihe.
Obi abụọ adịghị ya na usoro nhazi nke eziokwu, dị ka akọwapụtara ebe a, na-eji nwayọọ nwayọọ na-aga n'ihu na agụmakwụkwọ. Nke a bụ n'ihi echiche nke oge anyị; ruo ogologo oge, ọ ga-atụle eziokwu nke ụwa ime mmụọ dị ka njakịrị nke uche efu, mgbe nkwenye na-edoghị anya, ndị ọzọ na ihe niile dị adị, ọ ga-eyi ya n'ihi ntụgharị uche siri ike. Ka anyi gosiputa na o nweghi oge, usoro a nke agagh ada, ugbua, ka ewere ya dika ihe efu efu; na n'ọdịnihu, na aka nke ọzọ, ọ gaghị enweta ihe ọ bụla ọzọ.
Ọmụmụ ime ahụ na-ekpughe ahụ mmadụ na gburugburu ebe obibi nke ụwa, ebe ọ bụ na envelopu nchebe nke nne na-echebe ya. Ihe ndị agha na anụ ahụ nke envelopu a na-arụ na mbụ na-akọ ugbu a banyere ike na ihe nke ụwa nkịtị. Ruo oge nke abụọ, ahụ mmadụ ga-arụ ọrụ n'onwe ya nke dị iche na nke ga-ebili n'oge ndị ọzọ nke ndụ. Akụkụ anụ ahụ aghaghị ịkpụzi n'ụdị ụfọdụ; a ghaghị ewu ha dị ka atụmatụ doro anya nke na-achịkwa otu akụkụ nke usoro ha. Ọdịnihu ga-eme, ma n'oge ọ bụla, ọ ga-abụ nanị ụdị nke a ga-ekwupụta ruo n'afọ nke asaa. Ọ bụrụ na ụdị ndị mepụtara bụ ihe nkịtị, ha ga-abụ ụdị nkịtị ga - eto eto; ọ bụrụ na ha bụ ọdịiche dị iche iche, ụdị ọdịdị ndị a ga-eto. Apughi idozi mmejọ nke akwụkwọ eleghara anya na oge mbụ a. Dịka okike si enye tupu e mụọ ebe dị mkpa maka ahụ mmadụ, ya mere ọ bụ onye nkụzi ahụ, mgbe a mụsịrị ya, ịhazi ọnọdụ anụ ahụ mara mma. Naanị ọnọdụ a na-aghọta nke ọma na-eme ka akụkụ ahụ nke nwatakịrị ahụ nwee akara nke ụdị a chọrọ.
Okwu anwansi abụọ na-egosi ọdịdị nke mmekọrịta nwatakịrị ahụ na gburugburu ya. Okwu ndị a bụ: nṅomi na ụkpụrụ. Aristotle kwuru banyere mmadụ na ọ bụ, nke anụmanụ niile, nke kachasị achọ ịṅomi; ọ dịghị afọ ndụ nke okwu a ji dị mma karịa na nwata ruo mgbe ịmalite nke abụọ. Nwatakịrị ahụ na-agbaso ihe ọmụma na mmegharị ahụ nke ya na ya, na iji ṅomie otú a, akụkụ ahụ ya ga-enwetara ụdị nke ga-anọgide na nke ahụ. A na-aghọta okwu ahụ bụ "ọnọdụ anụ ahụ" n'echiche sara mbara. Ọ na-agụnye ọ bụghị naanị ihe omume mere na nwa ahụ, ma ihe niile na-eme gburugburu ya, nke a ga-aghọta site na uche ya na ihe, site na ebe ọ bụla n'ime ohere anụ ahụ, nwere ike na-eme uche ya. N'ime usoro ihe a nile a na-esokwa na omume na omume rụrụ arụ, omume ezi uche ma ọ bụ enweghị uche nke nwa ahụ bụ onye akaebe.
Ndị a abụghị ụkpụrụ omume mmụọ, ha abụghị agbamume ndị a na-echebara echiche nke na-eme ka nghazi nke nwatakịrị ahụ na ntụpọ ahụ gosipụtara, mana ọ bụ omume nke ndị toro eto na-ewere ọnọdụ n'ihu ya. Ozizi anaghị eme ihe, maka ịkpụzi ụdị, na ahụ anụ ahụ, mana na ahụ etheric, na nke a, rue afọ nke asaa, nyere sheet etheric nne na-echekwa ya, dịka ahụ ahụ. akpọchiri anụ ahụ, rue mgbe a mụrụ ya, n’ahụ anụ ahụ nke nne. Ihe ọ bụla dị n'ahụ ahụ nke ga-etolite tupu afọ nke asaa gbasara echiche, omume, ncheta, wdg, ga-etolite na mberede, dị ka anya na ntị na-etolite na ime nke nne nwa na-enweghị enyemaka nke mpụga ...
N'okwu dị mma na nkà mmụta akwụkwọ, na Levana ou Ozizi nke EducationSite na John Paul, a na-achọpụta n'ụzọ doro anya na onye njem, mgbe ọ gafere eluigwe na ụwa, ga-amụtakwu ihe site na nọsị ya na afọ mbụ nke ndụ ya karịa n'oge ọ bụla ọ gara. Naanị, nwatakịrị ahụ adịghị amụta site na nkuzi, ma site na nṅomi, akụkụ ahụ ya na-ewepụta ụdị ha site na mmetụta nke gburugburu ebe obibi. A ga-ele anya anya mgbe ọ bụla, na gburugburu ebe nwatakịrị nọ, a ga-edozi agba na ìhè na mmekọrịta kwesịrị ekwesị; na ụbụrụ na mgbasagharị nke ọbara na-etinye anụ ahụ maka ọdịmma omume ọma, mgbe ọrụ nke nwa ahụ bụ onye àmà bụ nke omume. Ọ bụrụ, tupu afọ asaa, nwa ahụ na-eme ihe nzuzu, ụbụrụ na-ewere ụdị dị iche iche na n'oge ndụ ọzọ ọ bụ naanị ihe efu.
Mkpụrụ ahụ nke aka na-azụlite ike ha site na ịrụ ọrụ dịka ọrụ ha si dị. N'otu aka ahụ, ụbụrụ na akụkụ ahụ ndị ọzọ nke anụ ahụ mmadụ na-eduzi n'ụzọ ndị kwesịrị ekwesị, mgbe ha na-enweta mmetụta na-achọpụta site n'aka ndị gbara ha gburugburu. Otu ihe atụ ga-eme ka isi ihe a dị mkpa pụta ìhè. Nwere ike ịme nwa bebi site na ịpịgharị akwa nhicha, na-eji isi abụọ nke ụkwụ a, jiri aka ya na isi abụọ ọzọ, isi na eriri na iji ihe atụ, na ebe inki, anya, imi na ọnụ. Nwere ike ịzụta ihe a na-akpọ "nwa bebi" mara mma nke nwere ezigbo ntutu na agba agba agba, nye ya nwa ahụ. N'ezie, nwa bebi a mara mma jọgburu onwe ya ma jọọ njọ nke na ọ ga-emebi echiche nke ịchọ mma maka ndụ niile. Mana anyị agaghị ekwusi ike na nke a, n'ihi na isi okwu gbasara agụmakwụkwọ bụ usoro dị iche kpamkpam. Nwatakịrị ahụ, nke nwere akwa nhichagharị akpọrọ n'ihu ya, ga-emezue foto a n'echiche ya iji gbanwee ihe a ka ọ bụrụ mmadụ. Ọrụ nke iche n'echiche na-arụ ọrụ ma na-eduzi mmepe nke ụbụrụ. Nke a na-etolite ma na-amalite, dị ka akwara nke iji aka na-agbatị ma too. Ọ bụrụ na nwatakịrị anata "nwa bebi mara mma", ụbụrụ na-akwụsịlata. Ọ kpọnwụrụ wee kpọnwụọ ka ọ gbasaa.
Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike, dịka onye mgbaasị nwere ike, legide anya n'oge ụbụrụ na-emepe emepe, ha ga-enye ụmụ ha naanị ihe egwuregwu iji nọgide na-akwalite ọrụ na-akpụ ụbụrụ. Ihe eji egwuri egwu nile nke na-eji ihe omimi nke mgbakọ na mwepụ nwere ihe nkoropụ na mmetụta na-emerụ ahụ n'ahụ ụmụaka; Kama nke ahụ, ihe nile na-ewebata ndụ n'ime ihe nnọchiteanya ahụ na-eme n'ụzọ bara uru. Oge afọ ojuju anyị na-emepụta obere ihe ụmụaka dị mma. Dị ka ihe atụ, ejiji dị mma, dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ abụọ ndị a na-eche ihu na ihu, bụ ndị, site na osisi abụọ na-akpụgharị, na-ekegharị ihe ọzọ na nnukwu ihe ọkpụkpụ! Anyị ka nwere ike izute ihe egwuregwu ndị a n'ime ime obodo. Akwụkwọ foto, ndị na-achị ya nwere ike ịkpali ya, dịkwa mma n'ihi na ha na-ekwe ka nwata ahụ mee ka onyinyo ahụ ghọọ ihe nkiri. Ihe ndị a nile na-emepụta ọrụ dị n'ime akụkụ ahụ. Ọrụ a na-enye ha ụdị kachasị mma.
O doro anya na ngwa ngwa a na-emetụbeghị aka; ma a ga-akpọ ndị sayensị ime mmụọ n'ọdịnihu iji kọwaa nkọwa ndị dị mkpa. Ọ ga-enwe ike ime ya n'ihi na ọ bụghị abstraction efu. Ọ bụ ihe niile dị ndụ, nwere ike ịduzi anyị n'eziokwu.
Ka anyị kwuo ụfọdụ ihe atụ. Ọ dị mkpa, na mmụọ nke sayensị ime mmụọ, na-emeso dị iche iche, site na echiche nke gburugburu, a ụjọ, nwa aghara aghara, na nwatakịrị na-arọ ma na-ehi ụra. A ghaghị ichebara nkọwa niile n'uche, site na agba nke ụlọ ahụ na ihe ndị ọzọ a na-ejikarị agba nwa ahụ gburugburu, na nuances nke uwe ọ na-eyi.
Nye ndị na-adịghị eduzi sayensị ime mmụọ, ọ ga-emekarị ihe ọjọọ. Mmụọ nke ịhụ ihe onwunwe n'anya ga-eme ọtụtụ ihe megidere ihe ga-emeri. Nwatakịrị nke na-agba ọgba aghara aghaghị ịgba gburugburu na-acha uhie uhie ma ọ bụ na-acha uhie uhie ma yi uwe n'otu ụzọ; ebe otu onye na-ahọrọ, maka nwata nwere mmetụta dị egwu, ụcha acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ ma na-acha anụnụ anụnụ. Ihe dị mkpa bụ agba agba na-eteta n'ime. Red na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-acha anụnụ anụnụ na agba odo-agba mmanụ, nke dị mfe ịhụ site na-etinye ọsọ anya na-acha ọcha n'elu, na-etinye, ruo oge ụfọdụ, nke ọ bụla n'ime ndị a abụọ agba. Ụdị ndị a na-arụkọ ọrụ na-emepụta akụkụ anụ ahụ nke nwatakịrị ahụ, na-emepụta akụkụ nke akụkụ ahụ kwekọrọ na nke dị mkpa maka nwa ahụ. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ dị egwu hụrụ ọbara ọbara gburugburu ya, a na-emepụta onyinyo-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'ime. Ihe omume nke na-eme ka agba aja aja na-eme n'ụzọ dị jụụ. Akụkụ ahụ na-emikpu n'ime nke a iji nwayọọ.
Otu isi ihe na-achịkwa oge a: dị ka nhazi nke ọchịchọ na-ekwu onwe ya, ahụ mmadụ na-emepụta n'onwe ya ihe a na-etinye aka na ya ga-ekpebi njedebe ya. Ahụ ike anụ ahụ na-egosipụtakwa ọchịchọ ọchịchọ. Ogologo oge uto na-etinye ahụ anụ ahụ na ihe ngosi, anyị aghaghị ịgbalịsi ike igboju agụụ anụ ahụ na arịrịọ dị mma maka ọṅụ na ọdịmma. Ọṅụ bụ ike nke na-eweta mmemme kachasị ụtọ nke ọdịdị anụ ahụ nke akụkụ ahụ.
Otu nwere ike, n'ime usoro echiche a, na-emehie ihe dị ukwuu, site n'ịghara ịtọlite ​​mmekọrịta kwesịrị ekwesị n'etiti nwa na gburugburu ebe obibi ya. Mmetụta nke nri na-ekpughe ka ọ dị mfe imehie. Otu nwere ike, site na nkwụsị nke nwatakịrị ahụ, na-agbaghasị ahụ ike ya na nke anụ ahụ, ma site na nri kwesịrị ekwesị, onye nwere ike ichekwa ihe omimi ya ka o wee jụọ onwe ya kpọmkwem, otu iko mmiri dị nso, ihe oriri dị mma n'okpuru ọnọdụ e nyere, nakwa na ọ ga-ajụ ihe ọ bụla na-emerụ ahụ. Akpọrọ ka ha dozie atụmatụ nke agụmakwụkwọ, sayensị ime mmụọ ga-enwe ike ịkọwapụta oge na-egosi nkọwa nke nri. N'ihi na sayensị a bụ ihe dị mma na-emetụta ndụ. Ọ bụghị nkwupụta chara acha. Ọ bụ eziokwu na ọdịiche dị iche iche nke ndị ọkà mmụta sayensị ka ka na-egosi na nkọwa a ziri ezi.
N'etiti ike nke na-ekpebi ihe okike na ụdị nke akụkụ anụ ahụ, ọ dị mkpa ịgụta ọṅụ nke otu obi na-eme ka ọ nwee ọṅụ: obi ụtọ ọchị nke ihu, na karịsịa ịhụnanya na enweghị obi ebere, n'enweghị ihe mgbochi ọ bụla. Ụdị dị nro dị otú ahụ, dịka a pụrụ isi kwuo ya, ọnọdụ anụ ahụ, na, ọ bụrụ na mmadụ nwere ike igosipụta onwe ya, broods n'ụdị akụkụ anụ ahụ.
Ọ bụrụ n ’ọnọdụ ịhụnanya dị otu a ka nwatakịrị ahụ ga-esetịpụ aka, a ga-etinye ya n’ezie. Ya mere, ọ dị mkpa iji nlezianya kpachara anya na gburugburu ebe nwatakịrị ahụ enweghị ihe ọ bụla na - enweghị ike ị andomi ma ghara i mustomi ya. Ka anyi ghara ihu ihe obula anyi kwesiri ikwu banyere ya: nkea ikwesighi ime nke a!… Anyi nwere ike ikwenye n’uche anyi, kedu ka nwata ahu si eitomi, site n’ileba anya na mgbali nke imeputa ihe iriba ama nke na-ede ogologo oge tupu ya aghọta ha. Ọbụna ọ dị mma ka nwatakịrị ahụ wepụta ihe ịrịba ama ndị a ma buru ụzọ mụta ihe ha pụtara. Omie metụtara oge uto nke anụ ahụ, ebe ihe mkpụrụedemede pụtara metụtara ahụ etheric. Mmadu kwesiri ime na nke abuo mgbe ha mechara dentition nke abuo, mgbe envelopu nke ozo di iche. Karịsịa, n'afọ ndị a, a ga-akụziri ụmụaka ka ha kwuo naanị iji mmuo ha na-e toomi. Ha kacha amụ ihe na ntị. Ọ bụghị iwu na usoro niile dị mma bara uru.
N'ime afọ ndị mbụ, ọ dị oke mkpa na agụmakwụkwọ dịka abụ ụmụ na-eme, na mmetụta nke nwa ahụ, ọmarịcha echiche nke mara mma. Anyi aghaghi itinye uru karia ihe okwu ahu putara karia amara nke oma. Ka enwekwu mmetụta nke e mepụtara na anya ma ọ bụ ntị ga-enweta amara na nke ọhụrụ, ọ ka mma ọ ga-eme. Anyị ekwesịghị ileghara, dịka ọmụmaatụ, ikike okike e ji eme ihe n'egwuregwu egwú dị iche iche dị ka ụda egwú.
N'ime oge eze nke abụọ, ahụ etheric na-ewepu envelopu nke etheric ma si otú a na-emeghe oge enwere ike inweta agụmakwụkwọ na mpụga. Ọ dị mkpa, n'oge a, iji rịọ maka ikike nke, site na mpụga, nwere ike ime ihe na ahụ etheric. Mbuli ya na uto ya na-egosi: mmepe na ntopute nke echiche, akparamaagwa, akọnuche omume, akparamagwa, ncheta na ọnọdụ. Ahụ etheric na-enwe mmasị na ihe oyiyi, site na ihe atụ, site na ịdọ aka ná ntị nke iche echiche. Dị nnọọ ka a ga-enye nwatakịrị ahụ ruo afọ nke asaa ya ihe nlereanya nke ọ ga-e imitateomi, n'agbata eze nke abụọ na oge uto ya, nwa ahụ ga-enwerịrị ihe ndị nwere isi miri emi na nso chiri anya pụrụ iduzi mkpụrụ obi ya. Ugbu a ga-ebilite ohere nke onyonyo na akara ngosi.
A na-egosipụta ike nke ahụ etheric mgbe enwere ike iche echiche nke ọma, na nchekwa niile, nwere ike ịmalite mmụọ nsọ site n'àgwà ya na ihe nnọchianya ndị na-adọrọ mmasị ya ma ọ bụ na ihe ngosi nke ndụ. Ọ bụghị echiche efu nke kachasị na-emetụta ahụ etheric n'ụzọ na-eto eto, ma ihe ngosi dị oke aka; ma ọ bụghị ihe ndị a na-agwa ndị mmadụ, ma nke ahụ na-emetụta uche. Ikwu okwu na uche nke nkpuru obi bu, n'ime afo ndia, ezi akwukwo nke akwukwo. Ya mere ọ bụ ihe kachasị mkpa maka nwa okorobịa ahụ, n'oge a, iji nwee ike iru ya, na ndị nkụzi ya, ndị mmadụ na-atụgharị uche na-eme ka ọ mara ihe omume na ọgụgụ isi nke ọ ghaghị inweta.
N'ime afọ ndị mbụ nke nwata, ngwaa anwansi bụ: "nitationomi" na ihe nlereanya "; maka afọ ndị anyị na-arụ ugbu a, "nrubeisi" na "ikike" weghara. Onye ikike a nabatara ozugbo na nke a ga-enwerịrị ga-abụrịrị ihe nnọchiteanya nke ime ụlọ nke na-etolite akụkụ nke akọnuche akparamàgwà nwata, omume ya, echiche ya; ọ bụ ikike a nke na-adọbi mmụọ ya, nke na-egosipụta nghọta ya banyere ihe nke ụwa. N'oge ndụ a metụtara, ọkachasị echiche a banyere onye na-ede uri:
Na nzọụkwụ nke dike ị na-ahọrọ onwe gị,
Gbagoo, n'atụghị ike, gaa elu elu.
Sọpụrụ na nkwanye ugwu bụ ikike nke ahụ etheric ji etolite n'ụzọ kachasị nwee obi ụtọ; nwa okorobịa nke oge a nke na-enweghị ike inye onye ọ bụla ụtụ nsọpụrụ na-enweghị ngwụcha, ga-ata ahụhụ ụbọchị ndụ ya niile. Enweghị nsọpụrụ a na-eme ka ike dị ndụ nke ahụ efere na-akpọnwụ. Tụlee ihe omume na-esonụ banyere mmetụta ọ nwere n'obi ụmụaka. Otu nwatakịrị nwoke dị afọ asatọ nwere àgwà a na-akwanyere ùgwù karịsịa. Ihe ọ bụla ọ nụrụ banyere ya na-akpali ya nsọpụrụ dị nsọ. Approbọchị na-eru nso mgbe ọ ga-ahụ maka oge mbụ mmadụ a nke ọ buliri elu. N’akuku imeghe uzo nke nwoke a na-asọpuru ga-aputa, nkwanye ugwu nkwanye ugwu na-eme ka nwa a maa jijiji feelings Mmetụta mara mma nke ihe omume dị otú ahụ kpalitere bụ otu n’ime mmeri na-adịgide adịgide nke ndụ. Obi ụtọ nwa okorobịa ahụ, ọ bụghị naanị n'oge dị mkpa, mana site na ndụ kwa ụbọchị ga-enwe ike ileli ndị nna ya ukwu na ndị nkuzi ya anya dị ka ndị ọchịchị ya.
Ewezuga ndị ndu a dị ndụ, ndị a na-etinye ikike nke omume na nke ọgụgụ isi, aghaghị itinye ndị isi nke ngalaba nke mmụọ nsọ. Ndị dike nke akụkọ ntolite, akụkọ sitere na ndụ nke ndị ikom na ndị inyom kwesịrị ekwesị ịbụ ndị nlereanya, ga-achọpụta nghọta, nduzi nke uche. N'ikpeazụ, ụkpụrụ omume ọma na-adịghị mma pụrụ ịrụ ezigbo ọrụ ha, mgbe ụbụrụ kpakpando, ọbịbịa nke na - abịa, ga - esi na envelopu astral.
Ọ dị ezigbo mkpa iji kụziere ozizi nke akụkọ ihe mere eme n'ụzọ kwekọrọ n'echiche ndị a. Tupu mmalite nke abụọ, ihe ndekọ, akụkọ, wdg. onye na-agwa nwa ahụ okwu agaghị enwe nzube ọzọ karịa igbasa ọṅụ, ịdị ọhụrụ, obi ụtọ.
Mgbe oge a gasịrị, ọ ga-adị mkpa, site na nhọrọ nke akụkọ ndị ahụ, ịgbalịsi ike, Ọzọkwa, iji chee mkpụrụ obi nke nwa okorobịa ahụ foto nke ndụ nke na-akpali ya i emomi. Anyi aghaghi ichefu n'eziokwu na ihe ojoo nwere ike iwepu oria ojoo. Dọ aka na ntị agaghị aba uru; ma nwee mmasị n'echiche site n'ịchụpụ nwoke nke omume ndị a na-emekpa ahụ ma na-enye ihe ngosi nke nsonaazụ nke ha na-emetụta na ndụ, ị ga-eme ngwa ngwa iwepụ ntụpọ ndị a.
Mgbe niile ọ ga-adị mkpa icheta na ọ bụghị echiche nkịtị nke na-arụ ọrụ ahụ nke etheric na nhazi, mana ihe nnọchiteanya dị ndụ, na-adọrọ mmasị n'echiche ahụ. Iji usoro dị otú ahụ mee ihe, ọ bụ eziokwu, ụzọ kachasị mma, ma ọ bụghị nke ọzọ, ọ ga - arụpụta. Ihe niile a na-adabere n'otú e si agwa ya okwu, ya mere, otu onye enweghị ike, ọ bụrụ na enweghi nsogbu ọ bụla, dochie akụkọ gbasara okwu site n'ịgụ ihe.
Ihe ngosi ihe omuma, ihe ngba anya ihe omuma, mezuo uzo ozo n'agbata n'agbata uzo nke abuo. Ọ dị mkpa na nwa okorobịa ahụ na-emetụta ihe omimi nke okike, iwu nke ndụ, n'ụdị ihe nnọchianya karịa iji echiche ndị dị egwu nke arụmụka. A ghaghị ịkọwa ihe ngosi mmekọrịta nke mmekọrịta ime mmụọ na mkpụrụ obi n'ụzọ dị otú ahụ na iwu ndị na-achịkwa ha bụ ịkọ nkọ na mmetụta, karịa ịghọta akụkụ ha dị mma. Amaokwu Goethe: "Ephemeral bụ nanị ihe nnọchianya" ga-abụ usoro na-akpali akpali nke mmụta n'oge a. Ọ dị oke mkpa ka mmadụ nweta ihe omimi nke ndụ n'okpuru ákwà ihe oyiyi, tupu ha anabata ha n'ụdị iwu okike, wdg. Nke a bụ ihe atụ. Ka e were ya na anyị chọrọ ịmasị nwa okorobịa na anwụghị anwụ nke mkpụrụ obi, na nkewa ya. Anyị ga-eji ihe atụ nke nru ububa na-esi na chrysalis. Dị nnọọ ka nru ububa na-ahapụ chrysalis, yabụ mkpụrụ obi, mgbe ọ nwụsịrị, na-etinye envelopu ahụ. Iji nwee ọgụgụ isi iji nwee ike ịghọta eziokwu ahụ ziri ezi na n'ụzọ zuru ezu mgbe emesịrị, ọ dị mkpa na mkpụrụ obi eburu ụzọ nweta echiche site na ụdị oyiyi a. N'ezie, ihe atụ dị otú ahụ abụghị nanị maka ọgụgụ isi, kama ọ bụ mmetụta, mmetụta uche, nye mkpụrụ obi dum. Otu nwa okorobịa nke gafere ihe ndị a nile ga-egosipụta echiche dịgasị iche iche mgbe, ka oge na-aga, ọ na-eche ajụjụ ndị a ajụjụ ya. Ọ na-egbu mmadụ ka ọ ghara inwe ike ịbịaru nso, nke mbụ, ihe nhụba nke ndụ. Onye nkuzi ga-esite n'ike mmụọ nsọ chọpụta akara maka iwu niile, maka ihe omimi nile nke eluigwe na ala.
Ihe ndị a na-eme ka o nwee ike ịghọta mmetụta na-amịpụta nke a na-akpọ sayensị ime mmụọ iji mee ihe na ndụ. Gbalịa gwa ndị na-eto eto ihe mmụta ndị sitere na echiche nke ịhụ ihe onwunwe; n'ozuzu ị gaghị adọrọ mmasị ha; ndị a na-anọchite anya ha ga-abụ nanị nzapụ aghụghọ nke ụbụrụ a na-eche n'echiche iji chebara ya echiche. Ha jikọtara onwe ha ma gbanwee ha, ha anaghị etinye aka na onye ahụ. N'ezie, ihe atụ na-eme ọ bụghị naanị site n'okwu na ihe oyiyi, ma site na mmụọ mgbagwoju anya nke na-ejikọta ọkà okwu ahụ n'otu oge. Enweghị iwu doro anya na akara ya, ọkà okwu ahụ agaghị enwe mmetụta ọ bụla. Iji mee ihe dị irè, mmadụ aghaghị ikwere na otu onye na-egosi na ọ bụ eziokwu.
Naanị sayensị ime mmụọ na-enye nke a ma n'otu oge ahụ na-enye ihe nnọchianya ha onwe ha. Ochichi anwansi ekwesighi imekpa ya obi iji wulite onyinyo nke nkpuru obi na-ahapụ aru. Nye ya, akara a bụ eziokwu n'onwe ya. N'anya ya, nru ububa na-agbapụ site na chrysalis bụ n'ezie, dị ka ihe dị ala karịa ọdịdị dị adị, ihe na-emeghachi onwe ya na mpaghara dị elu, mgbe mkpụrụ obi na-ahapụ ahụ. O kwenyere na ya onwe ya na ike ya nile. Ihe omimi nke okwukwe a, gbasaa onye nuru ihe, choputara nkwenye ya. Mmiri nke ndụ na-eme ka onye nduzi na nwa akwụkwọ dị n'otu ma mee ka ha kwurịta okwu. Ma iji mepụta ya, onye nkụzi aghaghị ịbịakwute isi iyi nke sayensị ime mmụọ. Mmetụta, okpomọkụ na-ekpo ọkụ ga-eme ka okwu ya dịrị na ihe nile sitere na ya.
Ebube di ebube na emepee akwukwo. Mgbe ọ na-enweta ihe ndị dị ndụ nke sayensị ime mmụọ na-enyefe, ọ ga-abanye n'ime onwe ya site na ịmị mkpụrụ na ịhazi. Nke a ga-abụ okwu ikpe na njehie nke, na mpaghara a, bụ usoro dị ugbu a. Ụzọ niile nke agụmakwụkwọ na nkà mmụta dị iche iche na-efunahụ mmịba nke sap na-adịghị agwụ agwụ na-esite na mgbọrọgwụ dị otú ahụ, nweere onwe ya pụọ ​​na ndụ ma laa n'iyi. Nkà mmụta sayensị ime mmụọ nwere ihe omimi niile nke eluigwe na ala na akara akara kwesịrị ekwesị, ihe oyiyi ndị metụtara ihe dị mkpa. Ọ dịghị mkpa ka nwoke ahụ wuo ha. Okike nke okike nke eluigwe na ụwa ebipụtala ha n'ọrụ ha. Ọ bụ n'ihi eziokwu ndị a na ndị ọkà mmụta sayensị ime mmụọ ga-abụ ihe kachasị mkpa nke agụmakwụkwọ.
Ncheta bụ ikike nke mkpụrụ obi kwesịrị nlebara anya pụrụ iche n'oge a. Ọganihu ya na-emetụta kpọmkwem mgbanwe nke ahụ etheric. Dika uto nke ihe ndi a na-eme iji wepu ihe ndi ozo n'agbata igba ogwu nke abuo na oge ntorobia, oge a ga-achokwa ihe anyi na-eme iji gbalite mmepe nke ncheta. Ihe nchekwa a, na ihe ndị na-esonụ, na n'ụzọ dị ogologo, uru dị ala karịa nke nwere ike inye ya nlekọta kwesịrị ekwesị; ha agagh enwe ike ma ọ bụrụ na ha egbu oge.
Ọtụtụ mmejọ nwere ike ịpụta ebe a site n'echiche efu na nke ihe onwunwe. Usoro agụmakwụkwọ nke ejikọtara na ya na-achọkarị ịkpọ ajọ mbunobi megide ihe ọmụma na ebe nchekwa ejirila na-enweghị enyemaka nke ọgụgụ isi. Ọ gaghị akwụsị iji ike na-ebuso ọzụzụ ọzụzụ na-ezughị okè, na ụzọ kachasị mma ga-atụ aro iji zere na ncheta nke nwa okorobịa enweghi ihe ụfọdụ ọ bụ, gbanahụ ma eleghị anya nghọta ya.
Kedu ihe dị mkpa anyị na-etinye na okwu a: ịghọta! Nkwenkwe nke ịhụ ihe onwunwe, ịdabere nanị n'echiche, kwenye n'onwe ya na ọ gaghị ekwe omume ịbanye n'ime onwe ha, ma ọ bụghị site n'echiche efu; ọ gaghị ekwenye na, maka ọgụgụ isi nke ihe, ikike ndị ọzọ nke mkpụrụ obi abụghị ihe dị mkpa karịa ihe kpatara ya. Ọ bụghị nanị n'ụzọ ihe atụ na ọ bụ ihe ziri ezi ikwu na ọ ga-ekwe omume ịghọta site na mmetụta na obi dịka site n'echiche. Iche echiche bụ naanị otu ụzọ isi ghọta ihe ụwa a. Nanị ozizi nke ịhụ ihe onwunwe n'anya na-eche na ọ bụ nanị ụzọ. Ọtụtụ ndị na-ekweghị na ha nwere ihe onwunwe n'anya, Otú ọ dị, kwenyere na nanị otu ụzọ isi ghọta bụ ịghọta ihe kpatara ya. Ndị ikom a nwere ike ikwu na ha nwere okwukwe ma ọ bụ nke ime mmụọ. Ha nwere, n'echeghị ya anya, na-etinye ihe onwunwe n'anya n'echiche nke onwe ha, n'ihi na ọgụgụ isi bụ ọrụ nke mkpụrụ obi e nyere ka nghọta ụwa.
N'okwu nke ihe omimi miri emi nke ihe omuma mmadu, odi nkpa ighota ebe a site na akwukwo di nma nke Jean Paul kwuru na mbu. N'ikpeazụ, ọrụ a nwere ihe ọmụma kachasị mkpa na agụmakwụkwọ, ma kwesịkwara ịgụ na ọmụmụ ihe dị omimi karị. Ihe dị mkpa maka onye nkụzi ahụ dị ukwuu karịa nke ụfọdụ n'ime ọrụ ndị kachasị ewu ewu na mpaghara a. Lee amaokwu ndị metụtara ajụjụ anyị: A atụla egwu ọchịchịrị, ọbụnadị ahịrịokwu niile; egwuregwu nke physiognomy na ụda olu gị, ọchịchọ a na-emetụ n'obi nke nwa akwụkwọ ahụ iji nyochaa nke enigmas ga-agbasa ìhè na ọkara, nke a, oge inyeaka, ga-eme ka ndị ọzọ mara. "
“N’ime ụmụaka, dịka na Chinese na ndị ụwa, olumba bụ ọkara asụsụ. "
“Chee echiche na ha mụtara ịghọta asụsụ ahụ ọsọ ọsọ karịa ịsụ ya, dị ka anyị na-asụ Grik ma ọ bụ asụsụ mba ọzọ ọ bụla. "
Dabere na oru nke oge na na nkpughe nke ihe. "
Otu nwata nwoke dị afọ ise ghọtara okwu ndị ahụ "ezie," "nke ọma," "ọ bụrụ," "N'ụzọ megidere,"
"n'ezie"; ma gbalịa inye nkọwa banyere okwu ndị a, ọ bụghị nye nwa, kama ọ bụ nna! Na okwu "n'ezie" naanị, enwere ohere maka ụzọ na nkà ihe ọmụma. "
“Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ dị afọ atọ ghọtara asụsụ nwata ka nke dị afọ asatọ nke ọma, gịnị mere i ji chọọ ịkwụsị nke gị naanị ka nwata? Ka okwu gị bụrụ afọ ole na ole tupu oge eruo (ọ bụghị ndị ọkachamara na ọrụ ha na-ebute anyị ọtụtụ narị afọ?) Ya na nwatakịrị dị afọ abụọ, dị ka a ga-asị na ọ dị afọ isii, n'ihi na ọdịiche dị n'etiti afọ bụ attenuate na inverse nkezi nke afọ. "
“Ka onye nkuzi, onye n’etinye nnukwu ihe n’iru nwatakiri nye ndị nkuzi, chee echiche nke ọma na nwata ahụ eburula n’ime onwe ya, dịrị njikere ma mụta ihe niile, ọkara nke ụwa, ụwa ime mmụọ ya, nke ya echiche ime mmụọ na nke atụ, dịka ọmụmaatụ, na nke a n'ihi eziokwu a, asụsụ, nke enyere naanị akara ngosi nke ihe onwunwe, nwere ike ịkọwapụta onyogho nke mmụọ, nke enweghị ike inye ya. "
“Ọ Joụ nakwa nkwenye kwesịrị ịkwalite okwu anyị na-agwa ụmụaka; ọ joyụ nke ha na mmesi obi ike nke ha kwesiri ịkwali anyị ime otu ahụ. Ha nwere ike ịkụziri anyị asụsụ ahụ mgbe anyị ji ya na-akụziri ha; ha na-eju anyị anya site n'okwu nkwupụta okwu nwere nkwuwa okwu, dịka, dịka ọmụmaatụ, ndị m nụrụ ka ha na-agwa ụmụaka dị afọ atọ ma ọ bụ anọ: Onye na-akpụ ite (onye rụrụ karama); ikuku òké, n'ezie ndị mara mma karịa anyị ụsụ: ka gbuda ìhè (n'ihi ijiji), wdg "
Ọ bụ eziokwu na a na-agbaziri ikike a nke na-ejide onwe gị tupu ị ghọta ihe nghọta site na mpaghara ọzọ; ma ihe Jọn Paul na-ekwu banyere asụsụ na-emetụtakwa ebe nchekwa. Dị nnọọ ka akụkụ ahụ ike nke nwatakịrị ahụ na-emetụta usoro asụsụ ahụ na-enweghị enyemaka site n'echiche nke echiche banyere iwu nke usoro ọmụmụ na asụsụ ọmụmụ, otú ahụ ka nwa okorobịa ahụ ga-azụlite ncheta ya site na ihe ndị ọ na-anaghị eme ga-abanye n'ime nghọta mgbe emesiri. Ọbụna anyị na-amụta, na ndị na-esonụ, iji ghọtakwuo n'ụzọ dị mfe site na echiche ziri ezi echiche ndị, na mbụ, na-ejigide site na icheta, dịka a na-ejikarị usoro iwu eji eme ihe. site na asụsụ anyị na-ekwu. "Ihe a na-aghọtahieghị" nke ebe nchekwa bụ nanị ajọ mbunobi nke ịhụ ihe onwunwe n'anya.
N'ịga n'ihu site na otu ụkpụrụ ahụ, nwa okorobịa ahụ ga-amụta nanị iwu kachasị mkpa nke ịba ụba. Ọ ga-eji ụfọdụ ihe atụ, n'ihi na onye ahụ nwere ike ime nke ọma n'emeghị igwe. Mkpịsị aka jupụtara n'ọfịs a ka mma. Mgbe ahụ, ọ ga-ejikọta okpokoro okpukpuchi site na nanị ihe nchekwa.
Usoro a na-eburu n'uche iwu nke mmepe nke ọdịdị mmadụ. N’aka ozo, aghotahie ya, site n’itinye otutu uche ya n’olu n’oge nhiwe ncheta bu oru di nkpa. Ọgụgụ isi bụ ngalaba nke mkpụrụ obi nke amụrụ site na ndụ mpụga naanị site na oge uto. O kwesiri, ya mere, tupu oge a, echekwara site na mmetụta niile. Nwa okorobịa ahụ ga-ebido site n’icheta akụ dị iche iche nke mmadụ tụkọtara; mgbe ahụ ga-abịa oge mgbe ọgụgụ isi ga-ejide ihe ndị a chịkọbara. Ya mere, mmadu agaghi edetu naani ihe o ghotara, kama o ghaghi ighota ihe o ma, ya bu, ihe ndi o weghaara na ncheta dika nwatakiri na-eme. asụsụ.
Nke a bụ eziokwu maka ebe niile. Mbibi, site n'icheta nanị ihe ndị mere eme, aghaghị ibu ụzọ ghọta ihe ndị a site n'echiche nke echiche. Nke mbụ, kụziere ya nke ọma
na icheta ihe omuma ala. Mgbe ahụ nyochaa akụkọ n'ozuzu, wdg. N'ikwu ya, mmeri ọ bụla nwere ọgụgụ isi kwesịrị ịmịpụta site na akụ dị iche iche akpọrọ. Ihe ndị ọzọ nwa okorobịa ahụ ga - agbakọta ga - aba ụba n'oge ahụ mgbe ihe kpatara ya ga - aga n'ihu, ọ ka mma.
O doro anya na ọ dịghị mkpa ịkọwa na echiche ndị a nile na-emetụta nanị afọ ole a na-ajụ ajụjụ ebe a, ọ bụghị n'oge na-adịghị anya. Ọ bụrụ na a mụtara ihe ọzọ ka ịchọta ma ọ bụ n'ihi ihe ọ bụla ọzọ, ọ nwere ike ịbụ na usoro mmezigharị kacha mma ma bụrụ nke a ga-ahọrọ; Otú ọ dị, usoro ihe omume ahụ ga-adabere n'ụzọ dị ukwuu n'usoro iwu ime mmụọ nke onye mmụta ahụ. Na afọ nke na-echegbu onwe anyị, Otú ọ dị, ọ dịghị onye ga-eme ka uche dị jụụ site na njedebe dị ukwuu iji chebara ya echiche.
Ihe nkuzi nke dabeere na nchọpụta ihe omimi, ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ na-emegharị anya, bụkwa ihe onwunwe. A ghaghị icheta ihe nnọchiteanya ọ bụla maka afọ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ gaghị ezuru nanị ịpụta ma nyochaa osisi, mkpụrụ ma ọ bụ ifuru naanị sitere na echiche. Ihe niile ga-abụ ihe nnọchianya n'ime uche. N'ezie, mkpụrụ abụghị nanị ihe anya anyị na-ahụ. N'ime ya ka a na-ahụchi, nke a na-adịghị ahụ anya, ihe niile ga-eme n'ọdịnihu. Na ihe yiri nke a kariri ihe ndi uche na-acho: nke a bu ihe ozo n'ighota, n'uzo di ndu, site na uche, site n'echiche, site na obi. A ghaghị ịnwale echiche nke ihe omimi nke ndụ.
A gaghị ekweta na usoro dị otú a na-egbochi ịdị na-eme ka nchọpụta ahụ dị. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ bụrụ na mmadụ agbasochi ụdị omume a anya, eziokwu ahụ ejighị ya. N'ihi na ihe ihe omuma nke ihe bu nke uche na okwu, onye ga acho kwa uzo uzo esi eme ka ikwenye ikwenye okwu ahu bu ihe aghagh adi, mgbe eji aru nke aru ayi gbakwunye ya. ume nke mkpụrụ obi anyị.
Ọ bụrụ na ndị mmadụ, dị ka ndị mgbaasị, nwere ike ịhụ mmetụta na-agbawa obi nke na-etinye mkpụrụ obi na ahụ n'ahụ site na nkuzi nke dabeere na nchọpụta ihe na-adịghị ahụ anya, ha ga-anọgide na-erughị otú a. Maka ebumnuche, na okwu kachasị elu nke okwu a, ịmara ndị na-eto eto na njedebe nke mineral, osisi na anụmanụ, na nkwado nile nke nyocha ahụike, ma ọ bụrụ na ihe nnọchianya ndị a adịghị eje ozi n'oge ahụ iji mepụta echiche nke ihe nzuzo ime mmụọ?
N’ime ihe a niile, n’ezie, echiche ịhụ ihe onwunwe n’anya agaghị eche. O juru anwansi anya. Mana ọ ghọtara nke ọma na ịghọta echiche agụmakwụkwọ bara uru enweghị ike ịga n'ihu site n'echiche nke ịhụ ihe onwunwe n'anya. Ihe ọbụla mmụọ bara uru nke nkuzi a na-anya isi, ọ bụ ihe megidere na-egosi onwe ya n'eziokwu, mgbe ọ bụ ajụjụ nke ịga n'ihu ndụ yana mmetụta nke ịnabata mmadụ niile mmewere ya. N'ebe ezigbo eziokwu dị, ịhụ ihe onwunwe n'anya bụ echiche efu, onye hụrụ ihe onwunwe n'anya ga-ekwupụtarịrị okwu nke sayensị ime mmụọ ka ọ bụrụ ihe dị egwu, dịka eziokwu si dị. Obi abụọ adịghị ya na ọtụtụ ihe mgbochi ka ga-ebilite tupu ụkpụrụ nke sayensị a, nke na-esite na ndụ n'onwe ya, kwenye na ha ga-arụkọ ọrụ na agụmakwụkwọ; ma nke a bụ ihe e bu pụta ụwa. Ruo nwa oge eziokwu ndị a ga-adị ka ihe ijuanya nye ọtụtụ ndị uche. Ma ha ga-emetụta ọdịbendị nke ọdịnihu ma ọ bụrụ na ha bụ eziokwu n'ezie.
O di nkpa ka onye nkuzi mara nke oma ihe o metutara nwatakiri site na usoro ndi ozo. Ọ ga - esi na nke a mara ụzọ aghụghọ nke ga - akpali ya, maka ikpe ikpe ọ bụla, nwere ihe jikọrọ ya na ihe mgbaru ọsọ ahụ. N'ihi ya, ọ dị mkpa ịmara mmetụta ndị ga-erube isi n'iwu atọ nke mkpụrụ obi: echiche, mmetụta na uche. Ọ dị mkpa na mmepe ha na-eme na etheric ahụ, dị ka nke ikpeazụ, n'agbata ọgbụgba nke abụọ na oge ntorobịa, na-agagharị, site na mpụga aka, na-eme ka ụdị ahụ zuru oke.
Mmepe nke ike na ike ga-adabere na nke mbụ na ngwa ngwa ahụ n'ime afọ asaa mbụ nke ụkpụrụ nke agụmakwụkwọ n'elu; ihe dị otú a ga-achọ nkwado ya na mmepe zuru oke nke ụdị anụ ahụ. Site na nkwonkwo nke abụọ, ọ dị mkpa na ahụ etheric na-eto eto na-enyefe ume ike anụ ahụ nke usoro a kapịrị ọnụ, ekele nke onye a nwere ike inye ọdịdị ya, nkwado, njigide.
Mmetụta kachasị ike nke ahu nke etheric ga-enyekwa aka kachasi ike iji mee ka anụ ahụ dị ike. Ihe kachasị emetụ nke ahụ etheric bụ nke nwere ike ịda mbà n'obi site na mmetụta na ihe nnọchiteanya nke na-eme ka mkpụrụ obi mara mmekọrịta ya na ntọala ndị a na-enweghị ike imebi nke Eluigwe na Ala; ọ bụ ọrụ nke ahụmahụ okpukpe.
Ọchịchọ nke nwoke na onye agwa ya agaghị eme ka ọ dị mma ma ọ bụrụ na, n'oge a, enweghi mmetụta uche nke miri emi. Nzukọ ziri ezi nke Jehova ga-agba akaebe maka ụzọ anyị si achọ ebe anyị nọ n'eluigwe na ụwa dum. Mgbe mmadu adighi enwe obi iru ala site na mmekorita nke ime mmuo nke Chineke, uche ya na agwa ya agagh enwe ike, nguzosi ike na idi n'otu.
Mmetụta obi na-amalite na ọchịchọ n'okpuru nduzi nke ihe oyiyi na akara ndị a tụlere. Akụkọ ndị a na-enweta site n'akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ site na isi mmalite ndị ọzọ, ma na-ezo aka na ịkatọ ndị mmadụ, ga-enwe mmasị dị ukwuu. Ọmụmụ ihe nke na-anwa ịchọta n'ime ihe omimi na ịchọ mma nke okike dịkwa mkpa maka mmụta mmụta. Omenala nke aesthetic uche, na edemede nke mmasị na mmepụta nke nkà, ga-arụ ọrụ dị mkpa. Egwú ga-ewetara ozu ahụ nke etiri ahụ, nke na-esonụ, ga-eme ka ọ bụrụ ihe na-emetụ n'ahụ mgbe niile na ihe niile. Oge ndụ nke nwa okorobịa ga-abụ nke dara ogbenye, ma ọ bụrụ na ọdịbendị nke egwu egwu adịghị mma n'oge ahụ. Ọ bụrụ na ihe a pụtara kpamkpam, akụkụ ụfọdụ nke Eluigwe na Ala agaghị egosi onwe ya onwe ya. Nchegbu a ga-agbatị na nkà ndị ọzọ, ga-eme ka akụ ha niile gwụ. Usoro ihe omumu zuru oke ga-eleghara uto maka imeghari ma obu echiche nke agba. Ọ ga-etinye ohere maka akara na ịbịaru, maka ọmụmụ nke ụdị plastik.
Ọnọdụ ga-emekarị ka nkuzi a ghara ịdị mfe; ma ọ bụrụ na ọ nweghị ikpe, ha ga-eme ka njedebe ya kwụsị. Ụzọ kachasị mfe ga-adị ike, ma ọ bụrụ na onye nkụzi ahụ nwere nghọta nke maara otú e si esi mata ihe mgbaru ọsọ ahụ. Ọṅụ nke ndụ, ike na-arụ ọrụ na-eme ka ndụ nile nke ndị zụlitere nkà na echiche nke ịma mma dị. Na Mmekọrịta dị n'etiti ndị ikom a ejiri ịma mma na ịdị ebube maa jijiji.
Ọ bụ n'afọ ndị ahụ ka enwere mmetụta nke omume site n'ịmikpu onwe ya na ihe ngosi nke ndụ, site n'igosi onwe onye na ndị ọchịchị na onye ọ bụla nwere nhata. A gha ekwenye na njirimara ya ma, ọ bụrụ na, ekele maka ọmịiko, ezi na-egosipụta ịdị mma na njakịrị na-anabata echiche nke ihe ọjọọ.
Chee echiche, na ụdị nke ndụ ya nke na-eji echiche ndị nkịtị eme ihe, ka ga-anọgide na-adị n'azụ n'oge a. Ọ ghaghị ịmalite ịmalite n'amaghị ama n'ụzọ ọ bụla, chebe ya pụọ ​​n'aka mba nile, ebe akara na ihe oyiyi nke ndụ na ihe omimi nke okike ka e nyere mkpụrụ obi. Ya mere, n'agbata afọ nke asaa na oge ịka nká, ọ ghaghị ịmalite iche echiche ahụ, na-ekere n'ime ahụmahụ ndị ọzọ nke mkpụrụ obi. Ya mere, ihe mere nwatakịrị ga-eji chaa chaa chaa, nke mere na mgbe ọ gafechara oge a, ọ ga-enwe ike ikpebi onwe ya n'ihe gbasara ndụ, n'ihu ọmụma mmadụ. Mgbalị kachasị nta na mmepe ikpe ziri ezi, na ndị kachasị nlezianya na-elezi ya anya na ike mkpụrụ obi nke mkpụrụ obi, ga-abụ ihe kacha mma maka usoro ndụ nke mmadụ.
Ma sayensị ime mmụọ na-enye ntọala siri ike maka agụmakwụkwọ anụ ahụ nakwa maka mmụta nke mkpụrụ obi. Ememe ntụrụndụ na egwuregwu ga-enye ngosipụta ngosi. Dị nnọọ ka ịhụnanya na ọṅụ ga-asa ikuku nke na nwata, na etheric ahụ na-eto eto, site mmega ahụ, n'ezie ahụmahụ n'onwe mmetụta nke ya mmepe, ike ya na-eto eto mgbe nile. gymnastic omume, n'ihi na ihe atụ, ga-ga ka ọ bụla ije, ọ bụla nzọụkwụ, na mmetụta dị oké mkpa ka mkpụrụ obi nke ndị na-eto eto nwoke ahụ: "M na-eche na m a na-eto eto ike. Mmetụta a aghaghị ịbawanye ụba, mee ka mkpụrụ obi dịkwuo elu na mgbasawanye na-ahụ n'anya, ọ ghaghị ịdị na-eche dịka ọdịmma.
Ọ bụ eziokwu na iji anya mgbatị gymnastic na-emezu ihe mgbaru ọsọ a, ọ na-ewe karịa ihe omuma na nkà mmụta banyere ọdịdị ahụ mmadụ. Nke a choro ihe omimi nke oma na nke obi ebere banyere obi uto na obi ike nke na eso ndi mmadu na aru ha. Onye na-ahazi ihe omume ndị a ga-eche na ya onwe ya nwere mmetụta nke ike, ọṅụ, mmụba nke ụdị ọrụ ma ọ bụ ọnọdụ dị otú ahụ na-eweta, ma ọ bụ ike mgbapụta nke ndị ọzọ na-egosipụta.
Ka e wee nwee ike ime mgbatị ahụ na mmega ahụ na mmụọ a, onye nkuzi chọrọ ụfọdụ ihe ọmụma nke sayensị ime mmụọ masịrị ya karịa ọnọdụ uche nke naanị ya nwere ike iweta. Direct ihe omuma nke uwa ime mmuo abughi ihe achoro; O zuru ezu ịchọ itinye n'ọrụ na ndụ eziokwu nke sayensị sayensị gosipụtara. Ọ bụrụ na, ọkachasị n'akụkụ ndị bara uru dị ka agụmakwụkwọ, a na-emesi ike n'ihe ọmụma banyere anwansi, n'oge na-adịghị anya anyị ga-ahụ mkparịta ụka na-enweghị isi gbasara mkpa ọ dị igosipụta nkwupụta ndị a agwụla. Iji akọ eme ihe ga-egosipụta nke a, na-eme ka ngosipụta nke ndụ n'onwe ya dị ike ma sie ike. Na mgbe echiche meriri n'ụzọ dị otu a na nnwale dị irè ma mee ka anyị mata uru ya, ọ bụ na nkwenye a anaghị ebu ibu karịa "ebumnuche niile" ma ọ bụ jiri akara akwụkwọ sayensị? A na-amata eziokwu nke mmụọ n'ụzọ dị mfe site na mkpụrụ ha. N'agbanyeghị ihe niile, ngosiputa, n'agbanyeghị ụdị "sayensị" ya, nwere ike bụrụ egwuregwu egwuregwu nwata. Mgbe ọ dị afọ iri na ụma, a mụrụ ahụ astral. Mpụta ya nwere ike ịnweta ugbu a ga-enwe ike ịnabata ihe ndị dị na mpụga dabara maka ịmepụta nnọchite anya nkịtị, ikpe na ọgụgụ isi n'efu. Ruo oge ahụ, dịka anyị kwuru, ikike ndị a nke mkpụrụ obi ga-emepe emepe n'enweghị mmetụta ọ bụla, ebe agụmakwụkwọ na-arụ ọrụ ọzọ. N'otu ụzọ ahụ, na nne nne, spontaneously ịzụlite anya na ntị.
Nkwuputa nabatara oge mgbe nwoke, zuru oke tozuru okè, nwere ike ikpebi onwe ya ihe ndị ọ mụtara na mbụ. Onye nwere ike imebi ihe na-eto eto karịa nwa okorobịa. Anyị agaghị ekpe ikpe ruo mgbe anyị jikọtara ihe ndị jikọtara ọnụ, atụnyere, njedebe.
Ikpe ikpe onwe onye, ​​nke e mepụtara tupu oge a, ga-enweghi ụkọ. Ihe ndi a bu ihe omuma nke di na nchoputa nke neme ka omuma ihe ndi a ghara iru na ndu, ihe omuma nke okwukwe "nke putara na ihe omuma ole na ole, nke, n'enweghi ihe omuma, choro ikpe ikpe nke obi madu. ndị nwere ike iguzogide ọnwụnwa nke afọ. Iji nweta ikike iche echiche, otu ga-amụta ịkwanyere echiche nke ndị buru anyị ụzọ. Enweghị echiche dị mma, ma ọ bụrụ na ngalaba nke ọrụ adịghị njikere site na ngalaba nke na-enwe mmetụta n'eziokwu ahụ, ngalaba nke nwere okwukwe na-enweghị ike ịme ihe. Ọ bụrụ na ụkpụrụ agụmakwụkwọ a dị ike, anyị agaghị enwe ike ịhụ ụmụ nwoke na-eto eto ka ha wee chee onwe ha ka ha kpee ikpe, ma si otú ahụ zere mmetụta dịgasị iche iche nke ihe ngosi nke ndụ, mmetọ nke ga-emetụ uche ọ bụla na-amaghị.
Echiche ọ bụla a na-adịghị agu n'onye ezi omume site na nkwenye uche na-emetụta ya bụ ihe na-egbochi ọrụ nwa okorobịa ahụ. N'ihi na ikpé a na-ekpebisi ike nọgidere na-enwe mmetụta n'ahụ onye edemede ya; ihe omume na-amasị ya n'ụzọ dị iche mgbe ọ na-ezute echiche mbụ banyere ya. Ọ ghaghị ịbụ na nwa okorobịa ahụ nwere ọchịchọ ịmụta ihe ma kpee ikpe naanị mgbe e mesịrị. A ghaghị ikwupụta ihe kpatara ya naanị mgbe ikike ndị ọzọ nke mkpụrụ obi kwuchara; tupu oge ahụ, ọ ga-ejedebere na ọrụ mgbasa ozi. Ọ ga-abụ naanị iji mata ihe mmetụta anyị na mmetụta anyị, iji chịkọta ha kpamkpam, na-enweghị ikwe ka ikpe jide ha tupu ya eruo ntozu okè.
N'ihi ya, ọ ga-adị mkpa iji chebe ndị na-eto eto nke ọgbọ a site na ụdị echiche dịgasị iche iche ma kpasuo àgwà nke mkpụrụ obi bụ nke, n'ihu ahụmahụ nke ndụ, na-agbalịsi ike karịa ihe niile iji mee ya. N'ezie, anyị nwere ike ịgwa nwa okorobịa banyere ihe ndị ọzọ chere banyere nke a ma ọ bụ nke ahụ; ma a ghaghị izere na nkwubi okwu na-enweghị isi ga-eme ya ka ọ bịa oriri. Ọbụna echiche ga-emerịrị mmetụta ya; ọ ga-enwerịrị ike ịnụrụ echiche abụọ na-emegide onwe ya n'enweghị nkwupụta ozugbo, na-enweghị ntinye ma ọ bụ megide.
Nhazi dịka nke ntorobịa na-achọ n'ezie ndị nkụzi na ndị nkụzi na-enweghị njedebe. Mana ndị na-agba ume n'ezie site na sayensị ime mmụọ ga-achọpụta na ọ na-enye ha kpọmkwem otu mgbanwe mgbanwe na usoro ya chọrọ.
Naanị ihe ole na ole nke echiche banyere agụmakwụkwọ n'ụzọ ime mmụọ ka e depụtara taa. Ha ga-ezuru iji gosipụta ọrụ ọrụ mmadụ na usoro a na-atụ aro imezu. Imezu ọrụ a na-agbaso echiche zuru oke nke echiche nke sayensị ime mmụọ. Ma iji mezuo nke a, ọnọdụ abụọ ga-ezute.
Nke mbu, ajọ mbunobi nke sayensị ime mmụọ ga-akwụsị. Ndị na-amụ ya nke ọma ga-amata na ọ bụghị ụba nke mmebi iwu ha chere. Nke a abụghị nkọcha. Usoro niile nke nkuzi na agụmakwụkwọ n'oge anyị na-akwalite, na ileba anya mbụ, echiche a na ndị metụtara sayensị ime mmụọ bụ ndị nrọ, na-achụ chimeras. Nnyocha dị elu na-achịkwa nyocha ọ bụla dị iche iche, n'ihi na esemokwu na-enweghị nghọta na-ebili n'etiti anthroposophy na-ewere aha nke sayensị ime mmụọ, na mmeri niile nke oge a bụ ihe ndabere nke echiche ahụike nke ndụ. Agbanyeghị, inyochakwu nke ọma na-ekpughere ihe dị iche n’ihe dị n’ime echiche nke oge anyị, ọ bụrụhaala na ha enweghị ntọala nke sayensị ime mmụọ nyere; nhazi nke aka ha na-eduzi ha na nkwado a, na-enweghị nke ha onwe ha enweghị ike ịdịgide.
Ibu nke abuo di na nmekorita nke oma nke sayensi nke onwe ya. Mgbe n'akụkụ niile, anthroposophical circles achọpụtawo na ọ bụ, na nke mbụ, iji nweta ozizi anyị dị ka ihe bara uru site n'echiche nke ọtụtụ ọnọdụ nke ndụ, ọ bụghị nanị iji tụlee mkparịta ụka nke ọma na usoro mgbe ahụ onye ga - ahụ ndụ n'onwe ya na - enyefe onwe ya n 'ọmịiko maka ọmịiko nke sayensị ime mmụọ. Ma ọ bụghị ya, anyị ga-anọgide na-atụle anthroposophy dịka ọkọlọtọ nke òtù okpukpe nke nwere ndị ọhụụ dịpụrụ adịpụ, ndị na-enwe mmasị na mgbagwoju anya. Ma ọ bụrụ na ọ na-etinye onwe ya n'ọrụ ime mmụọ ma dị irè, mgbe ahụ, afọ agaghị aga site n'inweghi mmetụta nke ọgụgụ isi na-eto gburugburu ya.
Site n'aka Rudolf Steiner
Mmụta nke nwa
Zụta € 11,95
Emelitere ikpeazụ na Jenụwarị 16, 2021 4:04